စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၃၁ ) ( သ ဇ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၃၁ ) ( သ ဇ )
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၃၁ ) ( သ ဇ )
Posted by Foreign Resident on Jul 12, 2012 in Think Different | 24 comments
“ စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၃၁ ) ( သ ဇ ) ”
အဘ ရဲ့ ဒီ Post ကတော့
ကို Black Chaw ရဲ့
” သဇင် အတွက် မင်္ဂလာရှိသော စကားလေးတစ်ခွန်း “
ကို thihayarzar ရဲ့ Comment
” ဘာပဲပြောပြော ဟိုကောင်က နွားပဲဖြစ်ရတာပဲ ..
ဩစီ ကမို့လို့သာ သိပ်မသိတာနေမှာ “
ကို ပြန် ရှင်းပြထားတာပါ ။
” ဩစီ ကမို့လို့သာ သိပ်မသိတာနေမှာ “
ဩစီ ကနေမို့ သိပ်မသိတာ မဟုတ်လောက်ပါဘူး ။
မြန်မာနိုင်ငံ ပြင်ပကလူတွေက ၊ မြန်မာနိုင်ငံ အထဲကလူတွေထက် ၊
ပိုပြီးတောင် သတင်းစုံ သိရပါသေးတယ် ။
ဥပမာ ။ ။ အဘ သ ဇ ရဲ့ Part3အထိ ကြည့်ပြီး ပါပြီ ။
အဲဒီဟာတွေ ( Sex VDO တွေ ) ကို ဂရုကို မစိုက်လို့ ( ဂရုကို မစိုက်လို့ )
သ ဇ ကို လက်ထပ်ယူတာ ဖြစ်မှာပါ ။
ဩစီ မှာ ဒီကိစ္စမျိုးက သိပ်မထူးဆန်းပါဘူး ။
ဂုဏ်ယူစရာတော့ မဟုတ်ပေမယ့် ၊ ရှက်စရာလဲ သိပ်မရှိလှပါဘူး ။
VDO ထဲမှာကြည့်ပါ ။ သ ဇ ဘာမဟုတ်တာ လုပ်နေလို့လဲ ။
သူများ ပစ္စည်း ခိုးနေတာလဲမဟုတ် ၊ လိမ်ပြောနေတာလဲ မဟုတ် ။
သူ့ ရည်းစား နှင့် သူ မေထုန်ပြု နေတာပဲ ၊ ဘာမှားသလဲ ။
ကျနော်တို့ အဖေ အမေ တွေလည်း ပြုခဲ့ကြတာပဲ ။
ကျနော်တို့ အဖေ အမေ တွေ မေထုန်ပြုခဲ့လို့ ကျနော်တို့ မွေးလာတာပဲ ။
သ ဇ ကျမှ အပြစ်ရှိရမှာလား ။
ဒီပစ္စည်းတွေ ယောက်ျား မိန်းမ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပါလာတာ ၊
ဒါ လုပ်ဖို့ ပါလာတာပဲဟာ ။
ကိုယ်တွေ ရဲ့ လက်ရှိ မိန်းမ / ရည်းစား ကရော ကိုယ်တွေ မတိုင်ခင် ၊
တခြားသူနှင့် မအိပ်ခဲ့ဘူးပါဘူးလို့ ၊
ဘယ်ကျေးဇူးရှင်က ကြွေးကြော် အာမခံရဲလို့လဲ ။
နိုင်ငံခြားက လူတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို ၊
မြန်မာ နိုင်ငံထဲက ( ဖားခြေရာကွက်ထဲက ) အမြင်တွေ နှင့် ၊
လိုက်ယှဉ်ကြည့်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။
ဥပမာ တစ်ခုပေးလိုက်မယ် ။
စလုံးက မြန်မာ သူဋ္ဌေး ( ည ည ထ ) က ၊
မိုးဟေကို ကို Lotion လူးတဲ့ VDO ကိုကြည့်ပြီးမှ ၊
သနားသွား ၊ ကြိုက်သွားပြီး ၊ လက်ထပ်ဖို့ ရည်စူးပြီး ၊
သံလွင်လမ်းထဲက တိုက်ကို သိန်း ၇၃၀ဝ နှင့် ဝယ်ပေးလိုက်တာပါ ။
အဘ သူငယ်ချင်း ဆို တိုက် အရောင်းအဝယ် ကနေ ပွဲခ တောင် ရလိုက်သေး ။
အေး ၊ တစ်ခုတော့ရှိတယ် ၊
မြန်မာနိုင်ငံ ပြင်ပကလူတွေက ၊
အဲဒီ မယူခင်က Sex VDO တွေကို လုံးဝ ဂရုမစိုက်ပဲ ယူနိုင်ပေမယ် ။
တခြား တခြားသော အကြောင်းတွေကြောင့် ၊
သူတို့ စိတ ်အနှောက် အယှက် ဖြစ်ရင် ၊
သူတို့ စိတ်ကုန်သွားရင်တော့ ၊
ချက်ချင်း ကွာပြစ်လိုက်ဖို့ကိုလည်း ၊
နဲနဲလေးမှ ဝန်လေး အားနာ သနားနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ဗဟုသုတ အနေ နှင့် တစ်ခု ထပ်ပြောလိုက်မယ် ။
ဩဇီ မှာ Adultery ( လင် ခိုးမှု ၊ မယား ခိုးမှု ) ကို တရားစွဲလို့ မရဘူး ။
လူ့ အခွင့်အရေး အရ ၊
ကိုယ် ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်း ( လိင် အင်္ဂါ ) ကို ၊
သူတပါးကို အနှောက်အယှက် မပေးသရွေ့
( ဥပမာ ။ ။ လူမြင်ကွင်း မဟုတ်လျင် )
နှစ်ဦး သဘောတူ လျှင် ၊
ကြိုက်တဲ့သူနှင့် ကြိုက်သလောက် ဆက်ဆံခွင့်ရှိတယ် ။
သူ့လင် ၊ သူ့မယား ကလည်း သွားတား ခွင့် မရှိဘူး ။
မကျေနပ်ရင် ၊ လင်မယား ကွဲလိုက် ၊ ဒါပဲရှိတယ် ။
ဒီ Post ဟာ အပျိုစင် ဘဝ ကို ၊
စောင့်ထိန်းတဲ့ သူတွေကို တိုက်ခိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ဒါတွေက ကိုယ့်ခံယူချက်နှင့် ကိုယ်ပေါ့ ။
ကောင်းတယ် ၊ ဆိုးတယ် လည်း မပြောပါဘူး ။
အဘတို့လို နိုင်ငံရပ်ခြားက လူတွေ ကတော့ ၊
ဒီ ကိစ္စတွေကို သိပ်အရေးမထားပါဘူးလို့ ပြောချင်တာပါ ။
ဒါနှင့် စကား မစပ် ၊
သ ဇ VDO Part3ထဲမှာ
လက်ထိပ်တွေ ၊ Blindfold မျက်စိကာ တွေ ၊
ရိုက်တာ တွေ ပါ ပါလာပြီ ။
BDSM Movie ကျနေတာပဲ ။
သ ဇ တို့ တော်တော် ခေတ်မှီတာပဲကွယ် ။
ဩဇီက ဆရာသမားက မသိလို့ ယူတာ မဟုတ်လောက်ဘူး ။
သိလို့ ယူတာ ဖြစ်ဖို့များတယ် ။ ဟီဟိ ။
ဘယ်လိုကြီးပါလိမ့် အဘရာ ကျနော်တို့နဲ့တော့ အဲလိုမျိုးတွေ
မနီးစပ်နိုင်သေးဘူးလို့ ထင်မိတာပါပဲ ၊ နဲနဲ အလှမ်းဝေးနေသေးသလားလို့ ၊
အဘရေးတာ ဖတ်လို့တော့ ကောင်းပါတယ် ။
သို့သော်လဲ ပေါ့လေ —-
” ကျနော်တို့နဲ့တော့ အဲလိုမျိုးတွေ
မနီးစပ်နိုင်သေးဘူးလို့ ထင်မိတာပါပဲ ”
ဟုတ်ပါတယ် ၊ အဘ လည်း အဲလိုပဲယူဆပါတယ် ။
နိုင်ငံခြား တွေးပုံလေးကို ဗဟုသုတ တင်ပြရုံလေးပါ ။
ဗဟုသုတအနေနဲ့တစ်ခု ထပ်ပြောလိုက်မယ်။ဩဇီမှာ Adultery ( လင် ခိုးမှု ၊ မယား ခိုးမှု )ကို တရားစွဲလို့မရဘူး။လူ့အခွင့်အရေးအရ၊ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်း ( လိင်အင်္ဂါ )ကို၊သူတပါးကို အနှောက်အယှက် မပေးသရွေ့( ဥပမာ ။ ။ လူမြင်ကွင်း မဟုတ်လျင် )နှစ်ဦးသဘောတူလျှင်၊ ကြိုက်တဲ့သူနှင့်ကြိုက်သလောက် ဆက်ဆံခွင့်ရှိတယ်။သူ့လင်၊ သူ့မယားကလည်း သွားတားခွင့်မရှိဘူး။ မကျေနပ်ရင်၊ လင်မယားကွဲလိုက်။ ဒါပဲရှိတယ်။
ဦးဖောရိန်းစာကိုဖတ်ပြီး အနောက်နိုင်ငံကလူနေမှုဓလေ့ကို ဃဃဏဏမသိသေးတဲ့သူတွေ အထူးသဖြင့် narrow-mindedဖြစ်တယ်… သူတစ်ပါးရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကြောင်းအရာတွေကိုနင်းပြီး ကိုယ့်အမြင်နဲ့ ထင်ရာမြင်ရာjudgeသိပ်လုပ်တတ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ခံရတဲ့ မြန်မာတစ်ချို့ရဲ့အမြင်မှာ အနောက်နိုင်ငံလူတွေအပေါ် ပိုပြီး တစ်မျိုးမြင်သွားနိုင်ပါတယ်။
ကျမယောက်ျားအမေမှာ (သူတို့ကအော်စီကတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဥရောပနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကပါ) မောင်နှမ၈ယောက်ရှိပါတယ်။ သူမအပါအဝင် ကျန်တဲ့သူ့မောင်နှမတွေအားလုံး အိမ်ထောင်ရေးအပေါ်ထားတဲ့စိတ် အင်မတန်မှ တည်ကြည်လေးနက်ပါတယ်။ faithfulဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မောင်၊အစ်ကိုတွေက လူလွတ်ဘဝတုန်းက ယောက်ျားသဘာဝ ပျော်ခဲ့ပွေခဲ့ပေမဲ့ သူတို့အတည်အကျအိမ်ထောင်ထူပြီးနောက်မှာတော့ အင်မတန်မှသစ်စာရှိပါတယ်။ သူတို့အားလုံး အခုအသက်၇ဝနားကပ်နေကြပေမဲ့ သူတို့လင်မယားတွေ ဘယ်သွားသွားဘာလုပ်လုပ် ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့အမြဲအတူတကွရှိနေကြတုန်းပါပဲ။ ဦးဖောရိန်းပြောသလို လင်ရှိမယားရှိပြီး ဒိပြင့်လူနဲ့ အပြင်မှာတွဲချင်သလိုတွဲကြတဲ့ စုံတွဲတွေလည်းရှိပါတယ်။ လူမျိုးဓလေ့တူပေမဲ့ စရိုက်ချင်းမတူတာတွေပေါ့။
” အနောက်နိုင်ငံကလူနေမှုဓလေ့ကို ဃဃဏဏ မသိသေးတဲ့သူတွေ ၊
မြန်မာတစ်ချို့ရဲ့အမြင်မှာ အနောက်နိုင်ငံလူတွေအပေါ် ပိုပြီး တစ်မျိုးမြင်သွားနိုင်ပါတယ် ”
PEACEMAKER ပြောတာ မှန်ပါတယ် ။
ကျနော်က ဩဇီမှာ လူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို ၊
တရားဥပဒေက အကာအကွယ်ပေးထားပုံကိုပဲ ပြချင်တာပါ ။
လူ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ တရားဥပဒေအရ ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ Limit
ဘယ်လောက်အထိ ရှိတယ် ဆိုတာ ပြချင်တာပါ ။
ကျနော့်အထင် အမေရိကန်မှာတောင် ၊
Adultery ( လင် ခိုးမှု ၊ မယား ခိုးမှု ) လုပ်ရင် ၊
တရားစွဲလို့ ရပါတယ် ။
ဩဇီက လူတွေ အဲဒီလိုပဲနေကြတယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး ။
ကျနော့်မျက်မြင် ဩဇီ အဖိုးကြီး အဖွားကြီးတွေ တစ်ဦးကို တစ်ဦး ၊
ကြင်ကြင်နာနာ နှင့် သေတပန် သက်တဆုံး ပေါင်းတာ တွေ့ရပါတယ် ။
” အထူးသဖြင့် narrow-minded ဖြစ်တယ်…
သူတစ်ပါး ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အကြောင်းအရာတွေကိုနင်းပြီး
ကိုယ့်အမြင် နဲ့ ထင်ရာမြင်ရာ judge သိပ်လုပ်တတ်တယ်လို့
သတ်မှတ်ခံရတဲ့ မြန်မာ တစ်ချို့ ”
သူ တစ်ပါး ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကြောင်းအရာတွေကို ၊
သိပ် စပ်စု ဆုံးဖြတ် တာတော့ မြန်မာတွေ နာမည်ကြီးပါပဲ ။
ဟီဟိ ၊ ကျနော်လဲ သိပ် မကင်းလှပါဘူး ။
မြန်မာ ရုပ်ရှင်တွေ … သဘာဝမကျဘူး ..
မပီပြင်ဘူး … သရုပ်ဆောင် မကောင်းဘူး …
ဘယ်သူတွေ ပြောကြတာလဲ ဟင်င်င်င်င်င်
ဇဂါးမစပ်ပါ …. ဘယ်သူဖြန့်တယ် ဆိုတာ …
ကြာလေ အုံးစား လာလေပဲဗျို့ …..
မဟာဗျူဟာမြောက် ကို ..အပိုင်းပိုင်းခွဲပီး ဆော်နေသလို ခံစားရတယ်..
၃ ဟာ ၁ရဲ့ အစ လို့ မြင်မိပါရဲ့ အဘရယ်…
ဟီဟိ ၊ အပိုင်း သုံး မှာတောင် ၊
ရိုက်တာ တွေ ပါလာပြီ ဆိုတော့ ၊
အပိုင်း လေး သာထပ်ထွက်လာရင် ၊ ဟီဟိ ။
မှန်းတောင် မ မှန်းရဲဘူး ။
ကျနော်တို့ဆီမှာပြောနေတဲ့ဆိုရိုးစကားလေးက အမေရိကန်နိုင်ငံသားဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရပါလို၏ တဲ့
ဩဇီနိုင်ငံသားဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရပါလို၏ ဆိုရင်လည်း မဆိုးဘူးနော်။
ကို ကြောင်လေး ရေ ။
File Size ကြီးတယ်ကွယ် 127 MB တောင်ရှိတယ် ။
Wiki ထဲမှာ BDSM လို့ရိုက်ပြီး ရှာကြည့်လိုက်ပါကွယ် ။
သဇင်ခုလိုပုံတွေ ဖြစ်တာ သူ့ကိစ္စ ..ဒါကသူ့သမိုင်း သူ့အကြောင်းလေ ကိုယ်နဲ့မှမဆိုင်တာ
သူ့ယောင်္ကျားအတွက်လဲ နွားမကလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သိလို့ဘဲယူယူ မသိ လို့ဘဲယူယူ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူး ဒါလဲသူ့အကြောင်းပဲ……သူ့ အရင်ကမင်းသားရော သူတို့ လင်မယားအတွက်ရော နာကျင်တာ သနားတာမရှိ…ကိုကိုဂီ ပြောသလို ကောင်းတာလုပ်လို့ ကောင်းတာဖြစ်တာဘဲနော့်…:)
ခံစားရတာက သဇင်ရဲ့ ကလေးဘဝက မူဗီလေးကြည့်ဖူးတယ် တီတီတာတာနဲ့ သူ့အဖေနဲ့ဆော့ကစားနေပုံလေး တကယ်ကိုသာယာတဲ့ ချစ်စရာမိသားစုလေးပါ..
ဆိုတော့….အခုလိုသူတို့သမီးရဲ့ ကောင်းကြောင်းတွေ ပြည်တွင်းပြည်ပထိ ပျံနှံနေလေတော့ မိဘ ၂ပါးဘယ်လိုများခံစားနေရပါလိမ့်လို့ မိဘ နေရာကနေတော့ တော်တော်လေး ခံစားမိတယ်ဗျာ….
မြန်မာ့ရှေးရိုးစွဲမျက်စိနဲ ့ကြည့်လျှင်တော့ ဖုုံးဖိကာကွယ်ထားတဲ့ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ် လူအများရှေ့မြင်သွားရတဲ့ …ဒီကိစ္စက ကိုယ့်ကိုယ်ကို သက်သေချင်လောက်အောင် ရှက်စရာကိစ္စလို့မြင်မိပေမယ့် ၊ ကျွန်မ ကိုဘုန်းကျော်ပို့စ်မှာ ကော့မန့်ရေးခဲ့သလိုပေါ့ … လူလည်း အဝှာလုပ်တယ် … တိရိစာ္ဆန်လည်း အဝှာလုပ်တယ် … သူ့ကျမှ ဘာတွေများ ထူးလို့လဲ ဆိုသလို ………တကယ်တမ်း သေချာတွေးကြည့်လျှင် … သူ့ဘာသာသူအဝှာလုပ်တာ … ရေးကြီးခွင်ကျယ်ဖြစ်စရာတော့မလိုဘူးလို့တော့ ထင်ပါတယ် … သူမက စလက်ဘရက်တီတစ်ယောက်ပေမယ့် … အပြာကားရိုက်နေတာလည်း မဟုတ်ဘူး ၊ လူမြင်ကွင်းမှာအဝှာလုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူး …. ။ သူ့ကိုယ်ပိုင်ချိန်မှာ သူ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သူနေတာ … အပြင်လူက အခွေထွက်လာလို့ကြည့်တာကလွဲလျှင် ..ဘာများ ပြောလို့ရပါ့မလဲ … ။
ဒီဗွီဒီယိုပါ့ဘလစ်ဖြစ်သွားတာကတော့ စိတ်ဓါတ်မကောင်းတဲ့ လူတွေရဲ့ နှမချင်းမစာနာမှုနဲ့ကောက်ကျစ်မှုကြောင့်ပါ ။ ပရိတ်သတ်တွေကလည်း .. ကိုယ်အားပေးခဲ့တဲ့ .. အဆိုတော် ၊ မင်းသမီး .. ဒီလိုပုံစံမမြင်ဖူးလို့ …. အသစ်ဆန်းအဖြစ်ကြည့်လျှင်သာကြည့်မယ် … ဒါကတပိုင်းပါ .. သူ့ရဲ့ ပရိတ်သတ်အားပေးမှုကတော့ … သိပ်ပြီးပြောင်းလဲသွားမယ် မထင်ဘူး … ။ လူတိုင်းမှာ အလုပ်ချိန်နဲ့ ပါဆယ်နယ်ချိန်ဆိုတာမျိုးခွဲခြားကြပါတယ် ….. ။ ပါဆယ်နယ်ကိုယ်ပိုင်အချိန်မှာ … သူ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သူ ဘာပဲ လုပ်လုပ် … ၊ လေနဲ့ မနေနိုင်လို့ ဝေဖန်လျှင်တောင် ၊ အတင်းပြောလျှင်တောင် … စွက်ဖက်ခွင့်မရှိဘူးထင်တယ် … ။
မိန်းမတစ်ယောက် အထူးသဖြင့် စလက်ဘရက်တီ မြန်မာမ တစ်ယောက်ရဲ့ အရှက်နဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ၊ သတ်သေချင်စိတ်ဖြစ်လောက်အောင်ထိလုပ်ရက်သူတွေ လုပ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း …. ၊ အိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်သူရဲ့ အတွေးခေါ်ကျယ်ပြန့်မှုနဲ့ နားလည်လက်ခံနိုင်စွမ်းတွေကြောင့် နာမည်သာ ပျက်ချင်ပျက်မယ် ၊ လူကတော့လေလွင့်ပြီး ဘဝမပျက်ခဲ့ဘူး ……… ။ နာမည်ပျက်ပါစေ ၊ ဂုဏ်သတင်းကျဆင်းပါစေဆိုပြီး ရည်ရွယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီကိစ္စကြောင့် … သဇင်တစ်ယောက် နာမည်ပိုကြီးလာသလို … ၊ မိန်းမအများစုမျှော်လင့် ပိုက်ဆိုင်ချင်ကြတဲ့ … အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်းရလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း … သတင်းကြီးသွားတာ .. အရှုံးထဲက အမြတ်လိုပါပဲ … ။
သူ့မိန်းမသူ ကျေနပ်လို့ သူယူတာ ၊ ကြားကငထွားတွေ ခါးနာနေစရာမလိုပါဘူး ။
သူ့သဘောနဲ့သူ အဖန်တစ်ရာကြေပြီးသား ဘယ်သူ့ကိုပဲ ယူယူ ၊ ဒါဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ပါပဲ ။ ပြည့်တန်ဆာမကိုတောင် ချစ်မြတ်နိုးလို့ တရားဝင် အတည်တကျ ပေါင်းသင်းသူတွေ ရှိသေးတာပဲ … အဓိကက နှစ်ယောက်စလုံး ခွင့်လွှတ်နားလည်မှုရှိဖို့ ၊ တန်ဖိုးထားဖို့ ၊ သစ္စာရှိဖို့ပါပဲ ။ ကျန်တာတွေကတော့ … ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ ချီးမွမ်းခုနှစ်ရက် … ကဲ့ရဲ့ ခုနှစ်ရက်ပါ …… ။ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ သွားပုပ်လေလွင့် ၊ ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကို အလူးလဲ ခံခဲ့ရဖူးသူအဖြစ်နဲ့ …. စာနာသနားမိသလိုတော့ဖြစ်မိသလို ၊ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လည်း ဖြစ်မိပါတယ် ။
” အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်း ”
အဲလိုပြောဖို့ကလည်း နဲနဲ စောနေပါသေးတယ် ။
ဝင်ပွားအုန်းမှ ဒါမျိုးဆို တစ်ရေးနိုးထပြောရလည်းနိုးပလာဘလမ်ဘဲ ကွိကွိ
ဘယ်တုန်းကလည်းမသိ ဘယ်နေရာမှာလည်းမပြောတတ် သတင်းတစ်ပုဒ်ဖတ်ဘူးတယ်
ကျုပ်လိုဘဲ ဗလခပ်တောင့်တောင့်နဲ့ နိုင်ငံခြားမင်းသားကြီးတစ်ယောက်
အာနိုးဆိုလား ဘာလား အဲ့သည်လူကြီးက အမေရိကန် ဘယ်မြို့တော်ဝန်ဆိုလားဘဲ
သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ခင်သနားသဖြင့် ဒီအကြောင်းတွေကို
သတင်းတွေထဲမှာ မပြောကြစေလိုပါဘူးလား ဘာလား အတိကျတော့မမှတ်မိတော့လို့ပါ
သူတို့အကြောင်းကြောင်းကြောင့် လင်မယားကွဲသွားတာကို သတင်းမီဒီယာတွေကနေမပြောတဲ့အခါ
ဘာမှ သိပ်ပြီးမကြီးကျယ်လှတော့ဘူးပေါ့ ဒါ့ကြောင့်
ခုကိစ္စမှာလဲ သူတို့ဖာသာမဂင်္လာတောင်ဆောင်နေကြပြီ ကျုပ်တို့ဝိုင်းပြောဝိုင်းဟောတာနဲ့
တစ်ဖွားဖွား နှစ်ဖွားဖွား သုံးဖွားဖွား လေးဖွားဖွား ငါးဖွားဖွား ခြောက်ဖွားဖွား ခုနစ်ဖွားဖွား
ရှစ်ဖွားဖွား ကိုးဖွားဖွား ဆယ်ဖွားဖွား
Schwarzenegger paternity: Former Gov. Arnold Schwarzenegger …
May 17, 2011 – Photos: A political marriage with star power “I ask that the media respect my wife and children through this extremely difficult time,” the statement concluded. “While I deserve your attention and criticism, my family does not. ” …asource who declined to be identified because of the former governor’s request for privacy.
အဘ ပြောတာကို ထောက်ခံပါတယ် ပြည့် တန်ဆာ ဖြစ်နေပါစေ ကြိုက်လို့ ယူနေ သူတွေကတပုံကြီးပါ ဗွီဒီယိုကို ခိုးရိုက်ပြီးတင်ပေးသူသာ သူမဟုတ်တာ လုပ်တဲ့ အတွက် တွေးပြီး နောင်တရစရာ တခု အဖြစ်ကျန်ခဲ့ပါလေ့မယ်
ဦးဖော ပြောသလိုဆို … ဗီဒီယိုခွေတွေကြည့်ပြီး သဘောကျလို့ — အပိုင်စားဝယ်လိုက်သလိုဖြစ်နေပြီပေါ့နော်
နံမည်ကြီးတဲ့တစ်နေ့ စင်ပေါ်ရောက်တဲ့နေ့ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့မင်းစောင့်နော် ……….
ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်တွေဆိုတော့လည်း လူစိတ်ဝင်စားတာခံရတာပေ့ါလေ သူတို့သရုပ်ဆောင်တဲ့ ဘယ်ကား မဆိုပရိတ်သတ်တွေက စောင့်မျှော်ကြည့်ရူအားပေးခံရတယ်လို့ပဲပြောချင်တယ် ……. တစ်ခုတော့ရှိတာပေ့ါ လူတွေကလည်း ခက်သား အဘရေ …. သူများမကောင်းတာလုပ်တော့လူမြင်သွားတော့ သူများတွေပြောဆို ကဲ့ရဲ့တော့လည်း ရောသောပေါသောလိုက်ကဲ့ရဲ့ကြဝေဖန်ကြတာ လူ့သဘာဝလိုဖြစ်နေတာပေ့ါလေ … လူမသိသူမသိပဲ အခွေထွက်ပြီး ကျော်ကြားနေသူတွေကျပြန်တော့ ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့လက်တို့ဖော်မရှိတော့ ဒီလိုပဲ အပျင်းပြေကြည့်ရတဲ့အခွေဖြစ်သွားတာတွေလည်းရှိတာပေ့ါလေ ….. တစ်ချို့ဆို သဇင်ထက်ဆိုးတဲ့ဘဝကနေ ချမ်းသာတဲ့အမျိုးသားက ခေါ်ယူပြီး တင့်ကောင်းတင့်တယ် ယူလိုက်တာတွေလည်းရှိပါတယ် …. ဒါတွေက မထင်ရှားတဲ့ လူတွေမှာဖြစ်တော့ မထင်မရှားမကျော်ကြားခဲ့ဘူးပေ့ါ …. တစ်ချို့တစ်လေကျတော့လည်း `ချစ်တာချစ်တာပဓာနလို့ ဆိုချင်ပါတယ်´ ဒါမျိုးအရင်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကို နားလည်အပြစ်မမြင်တဲ့သဘောမှာ ထားလိုက်တဲ့သူတွေ ရှိနေပါတယ် … ဒါမျိုးက မြန်မာပြည်တွင်းမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေမှာလည်း ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိကြပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုရင် ဥပမာ – မုဆိုးမ တစ်ခုလတ် ကိုယူတဲ့ယောက်ျားတွေအများကြီးရှိပါတယ် ….. ဒီလူတွေက လူမြင်ကွင်းမှာ လိင်ဆက်ဆံမှုမလုပ်ပြပေမယ့် သူတို့လိင်ဆက်ဆံခံထားရတာကို သူနဲ့လက်တွဲမယ့်အမျိုးသားတွေက သိသိကြီးနဲ့ယူတာကြတော့ ဘယ်သူကအခုလိုဝေဖန်နိုင်မှာလဲ ….
အခုမှ တရားစခန်းက ထွက်လာတာမိုလို ့.
သဇင်ကတော့ အိမ်ထောင်ဖက်က သဘောထားကြီးတဲ ့၊ နားလည်မှုပေးနိုင်တဲ့ သူကိုရလို ့ကံကောင်းတာ က ကံကောင်းခြင်းမှာ ပြီးဆုံးသွားပြီး၊
ဇာတ်ကားထဲမှာ ပါတဲ့ မင်းသားကရော သူ ့ပုံကောမပါဘူးတဲ့လား၊ ဟိုဝန်ကြီး နဲ ့ဟိုညွန်မှူးသားလို ့နာမည် ထွက်လာတော့ သူသာ မဂ်လာမဆောင်ရသေးရင် သူ ့မှာလည်း နောင်ကြင်ယာရွေးချယ်တဲ့အခါ သတို ့သမီးက ဒီအကြောင်းကိုသိမှာပဲ။ ဒီကိစ္စကို ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးမဲ့မိန်းမကို ရွေးယူရတော့မှာပေါ့။ သူ ့မှာလည်း အမဲစက် ကျန်ခဲ့တာပဲ။ မဂ်လာဆောင် ပြီး ရင်တော့ မိန်းမက ပြသနာရှာလို့အနည်းဆုံးတော့ ရှင်းရဦးမယ်။
How r u? I really agree about that and i like this thinking post.
Whatever sex and love are so difference.
I have one love and I would like many sex another. I think is’nt problem.
You can show of people mind in ur all posts and
I appreciate for ur post. Now I m in Red sea and nearly Suez Cannel and
we have only3Myanmar people. Thanks Master.
ကိုယ်တွေရဲ့ လက်ရှိမိန်းမ/ရည်းစားကကော ကိုယ်တွေမတိုင်ခင် တစ်ခြားသူနဲ့ မအိပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ ဘယ်ကျေးဇူးရှင်က ကြွေးကြော်အာမခံရဲလို့လဲ။
မှန်ပါတယ်။ ဘယ်ကျေးဇူးရှင်ကမှ အာမ မခံနိုင်ပါဘူး။ အာမခံတယ်ဆိုလည်း ဒါဟာ အရေးပါတဲ့အရာတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။
သာယာသော အိမ်ထောင်တစ်ခုထူထောင်ဖို့ရာ အပျိုစင်စစ်တွေ၊ နုနုထွဋ်ထွဋ်တွေက အခရာမကျပါဘူး။
နိုင်ငံခြားကလူတွေရဲ့အတွေးအခေါ်ကို မြန်မာနိုင်ငံထဲက(ဖားခြေရာခွက်ထဲက) အမြင်နဲ့ လိုက်ယှဉ်ကြည့်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
နှစ်ဦးသဘောတူလျှင် ကြိုက်တဲ့သူနဲ့ ကြိုက်သလောက် ဆက်ဆံခွင့်ရှိပါတယ်။ သူ့လင်၊ သူ့မယားကလည်း သွားတားခွင့်မရှိဘူး။
အဘတို့လို နိုင်ငံရပ်ခြားက လူတွေကတော့ ဒီကိစ္စတွေကို သိပ်အရေးမထားပါဘူးလို့ ပြောချင်တာပါ။
တိဆန္ဒ-သုံးမျိုးသော အမူအကျင့်၊အကြံတို့သာရှိ၍ တိရိစာ္ဆန်ဟုတွင်သည်လို့ ဆိုပါတယ်။ အိပ်၊ စား၊ ကာမဆိုတဲ့ အရာတို့ကိုသာကြံဆောင်အားထုတ်ကြပါတယ်။ အစာတစ်ခုတွေ့လျှင် စားဖို့ပဲသိတယ်။ ကျန်တာဘာမှ မစဉ်းစားပါဘူး။ ဘယ်သူ့ဟာလည်း၊ ဘာလည်း၊ ဘာတစ်ခုမှ မဆင်ခြင်ပါဘူး။ ကိုယ်စားရဖို့အတွက်ပဲ အားထုတ်ပါတယ်။
မေထုန်မှီဝဲဖို့အခွင့်သာလျှင် မှီဝဲပါတယ်။ ကြိုက်တဲ့သူနဲ့ ကြိုက်သလောက် ဆက်ဆံပါတယ်။
ဘယ်သူကမှမတားပါဘူး။ မဆက်ဆံခင် လုရတာလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့။
ဒီလိုဆက်ဆံပုံ၊ ဒီလိုကိစ္စတွေကို ဘယ်သူကမှ သိပ်အရေးမထားပါဘူး။
ယဉ်ကျေးမှုမြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ဒီလိုကိစ္စတွေကို အားမပေးပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အသိဉာဏ်ရှိကြလို့ပါပဲ။ တိရိစာ္ဆန်တွေမှာရှိတဲ့ အသိထက် မြင့်သော အသိရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်။
The best comment for that post. Thank you for your comment.
ဘာနဲ ့ပဲထဲ့ပြီးသောက်သောက်ရေရဲ ့မူလဂုဏ်သတ္တိကမပြောင်းလည်းသလို….
အဟောင်းနဲ ့ထိုက်တန်ဘို ့ပါလာတဲ့သူက၊ပစ္စည်းအဟောင်းကိုသာပိုင်ဆိုင်ရရှိခံစားစေဘို ့ပဲရှိသလို..
ပစ္စည်းအသစ်နဲ ့ထိုက်တန်ဘို ့ပါလာတဲ့သူက၊ပစ္စည်းအသစ်ကိုသာပိုင်ဆိုင်ရရှိခံစားစေဘို ့က
မိန်းကလေးတွေအနေနဲ ့ကပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအမှားမခံဘို ့က
အားတုံ ့အားနာစွာနဲ ့ပဲ.။ပါးစပ်ကနေပြီးဥပုဒ်စောင့်ထားတယ်ဆိုပြီးကြံရာမရတဲ့အဆုံးပြောထွက်မိသွားရင်းအပြင်မှာပဲထိုင်စောင့်ရင်းအိမ်ဖော်နဲ ့စကားပြောဆိုနေလိုက်ရတယ်။